Amerika Latina · Oktobra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Latina · Oktobra, 2010
Tantara mikasika ny Amerika Latina tamin'ny Oktobra, 2010
Arzantina 28 Oktobra 2010
Ny marainabe, ny andron'ny alarobia, ny filoha teo aloha, Nestor Kirchner, sady vadin'ny filoha ankehitriny Cristina Fernandez no nodimandry noho ny aretim-po. Tsy diso anjara tamin'ny resaka momba ity fahafatesana tampoka sy tsy noeritreretina ity ny mpamaham-bolongana Argentina.
Orogoay 27 Oktobra 2010
Panama: Volavolandalana iadiana amin'ny fanavakavahana noho ny safidy olona iarahana
Panamà 26 Oktobra 2010
Nanomboka miady hevitra mikasika ny lalàna vaovao hiaro ny olona amin'ny fanavakavahana mifototra amin'ny safidy amin'izay tian'ny olona iarhaana ny Antenimeram-pirenena Panameana. Nanoratra tao amin'ny vohikala Corresponsales Clave [es] i Dayra García: La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó en el primer debate (con...
Votsotra tamin'ny Panama ny fandraisana ny lalao Bolivariàna
Panamà 25 Oktobra 2010
Voatonon'ny Mpanoman-dalao fanatanjahantena Bolivariana (ODEBO) hampiantrano ny faha-XVII ny Lalao Bolivariana hontontosaina amin'ny 2013, tamin'ny volana mey lasa teo i Panama. Saingy noesorina taminy indray izany tamin'ity herinandro ity
Meksika: Vehivavy 20 taona no lehiben'ny polisy vaovao ao avaratr'i Meksika ao
Meksika 21 Oktobra 2010
Vehivavy manambady 20 taona vao nianatra momba ny fanadihadiana vono-olona tamin'ny herintaona i Valles García; izy ihany koa no lehiben'ny polisy vaovao any Práxedis, Chihuahua. Eo ho eo amin'ny 100 kilometatra miala an'i Ciudad Juárez, tanàna meksikana malaza indrindra amin'ny herisetra any Meksika i Práxedis.
Eoropa Andrefana 20 Oktobra 2010
Horonantsary: Ahoana no hikajiana ny rano ho madio lalandava sy hampiasàna azy am-pisainana
Avy amin'ny toro-làlana ho fampiasàna ny rano efa niasa na fifehezana ny firobarobàna rehefa mampiasa trano fidiovana isika, natao ho an'ireo ankizy madinika any Valle del Colca ao Peru, anazavàna ny maha-zava-dehibe ny tokony hitandroana ny loharanon-drano iraisan'ny daholobe ho madio lalandava. Miaraha aminay mandritra ny Blog Action Day itetezanay izao tontolo izao miaraka amina Horonantsary Fikajiana avy amin'ny Vazantany rehetra.
Shily 16 Oktobra 2010
Tamin'ny faha 2 Oktobra , taorian'ny fifanarahana lehibe niaraka tamin'ny governemanta Siliana, gadra Mapuche miisa 25 izay voatazona tany am-ponja tao amin'ny tanànan'i Concepción, Angol, Temuco ary Valdivia, no namarana ny fitokonana amin'ny tsy fihinanan-kanina izay naharitra 82 andro. Na teo aza izany, gadra Mapuche miisa 14 izay voatazona sy nampidirina toeram-pitsaboana tany Angol, Victoria, Cholchol ary Temuco no mbola nanohy ny fitokonana [es].
Arzantina 15 Oktobra 2010
Repoblika Dominikana: Fahitalavitra niomerika amin'ny taona 2015
Repoblika Dominikana 14 Oktobra 2010
24 Septambra 2015 no vanin'andro nofidian'ny Ivontoerana Dominikana momba ny Fifandraisan-davitra (Indotel) hanaovana ny fifindràna tanteraka mankany amin'ny fahitalavitra niomerika.